Bit By Bit - လေ့လာခြင်းအပြုအမူ - 2.3.7 ပျံ့
ပြည်သူ့အင်အားပျံ့, အသုံးပြုမှုပျံ့နှင့်စနစ်ကပျံ့က hard ရေရှည်ခေတ်ရေစီးကြောင်းလေ့လာဖို့ကြီးတွေဒေတာသတင်းရင်းမြစ်သုံးစွဲဖို့ပါစေ။
များစွာသောကြီးမားသောဒေတာသတင်းရင်းမြစ်များ၏အကြီးအအားသာချက်တစ်ခုမှာသူတို့အချိန်ကျော်ဒေတာစုဆောင်းသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ လူမှုသိပ္ပံပညာရှင်များကျော်အချိန်ဒေတာ longitudinal အချက်အလက်များ၏ဒီလိုမျိုးခေါ်ပါ။ နှင့်အညီ, သဘာဝ, longitudinal ဒေတာပြောင်းလဲမှုကိုလေ့လာဘို့အလွန်အရေးကြီးလှသည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောပြောင်းလဲမှုတိုင်းတာရန်အလို့ငှာ, သို့သော်တိုင်းတာခြင်းစနစ်ကသူ့ဟာသူတည်ငြိမ်ဖြစ်ရမည်။ လူမှုဗေဒပညာရှင် Otis Dudley Duncan က၏စကားများတွင် "သင်ပြောင်းလဲမှုတိုင်းတာချင်လျှင်, အတိုင်းအတာမပြောင်းကြဘူး" (Fischer 2011) ။
ကံမကောင်းစွာပဲ, များစွာသောကြီးမားသောဒေတာစနစ်များကိုအထူးသဖြင့်စီးပွားရေး, ငါပျံ့မခေါ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ပြောင်းလဲနေတဲ့စနစ်များ-နေကြသည်။ လူဦးရေပျံ့ (သူတို့ကိုသုံးပြီးသူအတွက်အပြောင်းအလဲ), အမူအကျင့်ပျံ့ (ကလူကသူတို့ကိုသုံးပြီးဘယ်လိုအပြောင်းအလဲ), နှင့်စနစ်ကပျံ့ (စနစ်ကိုယ်တိုင်ကအပြောင်းအလဲ): အထူးသဖြင့်ဤစနစ်များကိုသုံးအဓိကနည်းလမ်းပြောင်းလဲသွား။ ပျံ့၏သုံးသတင်းရင်းမြစ်တစ်ဦးကြီးတွေဒေတာအရင်းအမြစ်အတွက်မဆိုပုံစံကမ္ဘာပေါ်မှာအရေးပါသောပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နိုင်, သို့မဟုတ်ပါကပျံ့အချို့ကိုပုံစံကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နိုင်ဟုဆိုလို။
ပျံ့-လူဦးရေ၏ပထမဦးဆုံးအရင်းအမြစ်စနစ်သုံးပြီးသည်နှင့်ဤအပြောင်းအလဲများကိုတိုတိုနှင့်တာရှည်နှစ်ဦးစလုံး timescales အပေါ်ဖြစ်ပျက်နိုင်သူအတွက်အပြောင်းအလဲများကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ပျံ့-ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် 2012 ခုနှစ်အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲတွင်စဉ်အတွင်းအမျိုးသမီးတွေကရေးသားခဲ့ကြကြောင်းနိုင်ငံရေးနှင့် ပတ်သက်. tweets များ၏အချိုးအစားနေ့ နေ့မှစ. မြန် (Diaz et al. 2016) ။ ထို့ကြောင့်ဘာကို Twitter-ကျမ်းပိုဒ်များ၏စိတ်ဓါတ်များအတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အမှန်တကယ်ပဲမဆိုယခုအချိန်တွင်ပြောနေတာသူအတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဤအရေတိုရေရှည်အတက်အကျအပြင်, တွင်လည်း Twitter ကိုချမှတ်ခြင်းနှင့်စွန့်ခွာသူအချို့လူဦးရေဆိုင်ရာအုပ်စုများ၏ရေရှည်လမ်းကြောင်းသစ်ရှိခဲ့သည်။
စနစ်တစ်ခုကိုသုံးပြီးသူပြောင်းလဲမှုများအပြင်, ငါအမူအကျင့်ပျံ့မခေါ်ရသောစနစ်ကိုအသုံးပြုသည်မည်သို့မည်ပုံအပြောင်းအလဲများလည်းရှိပါတယ်။ အဆိုပါဆန္ဒပြပွဲပြောင်းလဲအဖြစ်ဥပမာ, 2013 ခုနှစ်ကာလအတွင်းတူရကီအတွက် Gezi ဆန္ဒပြပွဲများ Occupy, ဆန္ဒပြသူတွေ hashtags ကိုသူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှုကိုပြောင်းလဲသွားတယ်။ ဤတွင် Zeynep Tufekci ဘယ်လိုဖွင့် (2014) သူမက Twitter ပေါ်တွင်နှင့်လူတစ်ဦးအတွက်အပြုအမူစောင့်ကြည့်ခဲ့လို့သူမက detect နိုင်ခဲ့သည်သောအမူအကျင့်ပျံ့, ဖော်ပြထား:
"ဘာဖွစျခဲ့ပွီးအဖြစ်မကြာမီဆန္ဒပြအဓိကဇာတ်လမ်းဖြစ်လာခဲ့သည်အဖြစ်, လူတွေအမြောက်အများ ... ဆန္ဒပြပွဲများဆက်လက်ပင်ပိုမိုပြင်းထန်လာနေချိန်မှာ ... သစ်တစ်ခုဖြစ်ရပ်ဆန်းဖို့အာရုံကိုဆွဲရန်မှတပါး hashtags ကိုသုံးပြီးရပ်တန့်ခဲ့, အ hashtags ကိုနှိမ့်ချသေဆုံးခဲ့ပါသည်။ အင်တာဗျူးများဒီအကြောင်းရင်းနှစ်ခုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ လူတိုင်းခေါင်းစဉ်သိတယ်တစ်ချိန်ကပထမဦးဆုံးသည်, hashtag ဇာတ်ကောင်-ကန့်သတ်ထားတွစ်တာ platform ပေါ်တွင်တစ်ချိန်ကပိုနှင့်ဖြုန်းတီးမှာခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယအချက်, hashtag မအကြောင်းပြောနေတာများအတွက်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ခေါင်းစဉ်မှအာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်ဘို့ကိုသာအဖြစ်အသုံးဝင်သောမြင်ကြခဲ့ကြသည်။ "
ပျံ့၏တတိယကြင်နာ system ကိုပျံ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ကပြောင်းလဲနေတဲ့လူတွေသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏အပြုအမူပြောင်းလဲမဟုတျပါဘူး, ဒါပေမယ့်စနစ်ကိုယ်တိုင်ကပြောင်းလဲနေတဲ့။ ဥပမာအားဖြင့်, အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ Facebook က status ကိုမွမ်းမံမှုများရဲ့အရှည်ပေါ်ကန့်သတ်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် status ကို updates များကိုမဆို longitudinal လေ့လာမှုဒီပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အပိုငျးအအားနည်းချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ System ကိုပျံ့ငါအပိုင်း 2.3.8 အတွက်အဖုံးကိုပါလိမ့်မယ်အရာ algorithmic သဖွငျ့ချေါတဲ့ပြဿနာမှနီးကပ်စွာဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကောက်ချက်ချရန်, များစွာသောကြီးမားသောဒေတာသတင်းရင်းမြစ်သူတို့အသုံးပြုသောလျက်ရှိသည်ကိုဘယ်လို၌၎င်း, စနစ်များကိုမည်သို့အလုပ်လုပ်အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုသုံးပြီးသူအတွက်အပြောင်းအလဲများမျောနေကြသည်။ ပြောင်းလဲမှု၏ဤအရင်းမြစ်များတစ်ခါတစ်ရံစိတ်ဝင်စားဖို့သုတေသနမေးခွန်းများကိုဖြစ်ကြပေမယ့်ဒီအပြောင်းအလဲအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှရေရှည်အပြောင်းအလဲများကိုခြေရာခံကြီးတွေဒေတာသတင်းရင်းမြစ်များ၏စွမ်းရည်ကိုရှုပ်ထွေး။